बालुवाटार वा शीतल निवासले खराब आचरण, कर छलीको कालो पृष्ठभूमि वा भेट हुँदा अवाञ्छित मागहरू राख्न सक्ने, नाम भजाउने, फोटो खिचाउने र त्यसैको आडमा अन्य कारोबार गर्ने, ब्युरोक्रेसीलाई प्रभाव पार्न सक्ने, व्यवसायमा त्यसलाई उपयोग गर्ने वा लाटलुट पार्नेलाई दुरुत्साहित गरेको भनिन्छ । तर, त्यस्ता मान्छेले चोर ढोका फेला पारी, अलिकति पैसा खर्च गर्नासाथ भिआइपीहरूलाई आकाशमै छाँद हाल्ने मौका पाउँदा रहेछन् । जमिनमा टेक्ने ठाउँ नदिएर वा निवास, कार्यालयको बाटो बन्द गरिदिएर के फरक पर्छ र ? अलिकति पैसा खर्च ग¥यो, भिआइपी उडानमा सँगै उड्यो † विदेश उड्ने जहाजमा ग्राहकलाई बिजनेस र फस्र्ट क्लासको टिकट काट्न कसले छेक्न सक्छ र ? त्यस्ता टिकट बालुवाटार वा शीतल निवासले काटेको हुँदैन । उनीहरूलाई त्यो जहाजमा को–को जान्छन् भन्ने पनि थाहा हुँदैन । व्यापारी यति छट्टु कि नाकानाकामा बेलाबेला कोशेली चढाएका मान्छेको उपस्थिति हुने नै भयो । उनीहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहित आफूलाई आवश्यक पर्ने भिभिआइपीको विदेश उडानपूर्व नै फ्लाइट डिटेल्स पत्ता लगाउँछन् र त्यहीअनुसार टिकट काट्छन् ।
सलामी खाइवरी जहाज चढेका भिभिआइपी पनि छक्क पर्छन्, जब उनीहरू बिजनेश क्लासको फराकिलो सिटमा बसेको भेटिन्छन् । बिजनेश क्लासअन्तर्गत न्यारो बडीमा ६ र वाइडबडीमा १८ सिटसम्म हुन्छ । त्यस्तोमा भिभिआइपीसँग जाँदा पाँच–६ जनासम्मले पाउलान्, बाँकी सिटहरू त व्यापारीले किन्न सक्ने भए । यसरी उनीहरू चार–पाँच घण्टा भिभिआइपी÷भिआइपीसँगै रहन्छन् । गर्नुपर्ने कुरा, भन्नुपर्ने, फकाउनुपर्ने सबै काम त्यहीँ फत्ये गर्छन् । त्यहाँ न सुरक्षाकर्मीले रोक्ने, न भिभिआइपीका पिए, सहयोगीहरूले नै छेक्ने ! गयो, बस्यो, आफ्नो कुरा राख्यो । बदनाम मेडिकल कलेज व्यापारी बसरुद्दिन अन्सारी प्रधानमन्त्रीसँग सिंगापुर नै पुग्ने ।
मोमेन्टो एपरेल्सका मालिक चण्डी ढकालका भाइ हेमराज ढकाल, उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, ओखती व्यवसायी हरि शर्मा, खर्बपति विनोद चौधरीहरूले पनि बेलाबखत यसरी मौका उठाउने । अर्थात् जमिनमा ठाउँ नपाएपछि आकाशमै छोपछाप गर्ने । अघिपछि त प्रमले आफ्ना सहयोगीलाई यी–यी मान्छेलाई बालुवाटारको गेटमै रोक भन्नुहोला । ‘तर, उनीहरूमाथि आकाशमा हामीतिर आँखा तर्दै देख्यौ, तिमीहरूले रोक्न सक्यौ त भन्नेमा पुग्छन्’, प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले दिक्क मान्दै जनआस्थालाई सुनाए । जहाजको अघिल्लो क्याबिन पाइलट र एयरहोस्टेसहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ । त्यहाँ उनीहरूलाई बिजनेश क्लासको सिट लिएका कारण रोक्न पनि सकिँदैन । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)